Dhalashadii Eduardo Mendoza. Xulashada jajabka iyo odhaahyada | Suugaanta Wararka
Dhalashadii Eduardo Mendoza. Xulashada jajabka iyo odhaahyada
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 11/01/2022 12:00 | Qorayaasha, Buugaag
Eduardo Mendoza sawir qaade waxa uu dhashay maanta oo kale sanadku markuu ahaa 1943-kii. Iyada oo uu muddo dheer soo qaatay shaqo guul leh oo ay ku jirto a Abaalmarinta Cervantes ee 2016Qaab sheekadiisa, fudud oo toos ah, ayaa sidoo kale u taagan hodantinimada iyo isticmaalka kaftanka gaarka ah. Shaqooyinkiisii ​​ugu caansanaa waxaa ka mid ah Runta ku saabsan kiiska Savolta (taas oo uu ku gaadhay guushiisii ​​ugu horreysay), Magaaladii yaabka badnayd, Gurb war lagama hayo, taxanaha riwaayadaha jilaya in grotesque dembi baadhe oo aan magac oo ay ku jiraan cinwaanno sida Labyrinth of Saytuun, Sirta Crypt Haunted, Halgankii boorsada iyo nolosha o Tacaburka qolka dumarka Safarka yaabka leh ee Pomponio Flato, Catfight, iyo trilogy-ga Boqorku wuxuu helayaa, Ganacsiga Yin iyo Yang iyo Transshipment ee Moscow. Tani waa a xulashada weedho iyo jajab in la akhriyo oo la dabaaldego.
Eduardo Mendoza - Xulashada weedho iyo jajab
Wax war ah lagama hayo gurb
Sababtoo ah reer Catalans had iyo jeer waxay ka hadlaan wax la mid ah, taas oo ah, shaqada… Ma jiraan dad dunida ku nool oo aad uga jecel shaqada marka loo eego Catalans. Haddii ay garan lahaayeen sida wax loo sameeyo, waxay noqon lahaayeen sayidyadii adduunka.
Safarkii cajiibka ahaa ee Pomponio Flato
Runtuna waa maxay? Mararka qaarkood beenta lidkeeda; marar kale, lid ku ah aamusnaanta.
Ku soo laabashada hawlgabka Onofre wuxuu u baxay inuu la kulmo Delfina.
"Waan lugeynayay," wiilki ayaa ku yiri wench, "waxana nasiib u yeeshay inaan ku arkay adigoo soo socda." Ma caawin karaa?
"Waan ku filanahay oo waan ka haray" ayay tiri islaantii iyadoo dardargelinaysa socodka, iyadoo aad mooddo in culayska dambiilaha lagu soo ururiyay aanu culays ku ahayn.
"Ma odhan ma iibsan kartid, naag." Wuxuu iska dhigayaa inuu fiican yahay, ”Onofre ayaa yidhi.
-Waa maxay sababtu? Delfina ayaa la waydiiyay.
"Ma jirto sabab," Onofre ayaa yidhi. Waad naxariis badan tahay sabab la'aan. Haddii ay jirto sabab, hadda ma aha naxariis, laakiin xiiso.
"Si fiican baad u hadlaysaa," weriyaha ayaa gooyay. Tag haddii kale bisadda ayaan kugu dayn doonaaye.
Labyrinth of saytuun
Shandadii ayaan furay sidii qof aan rabin, indhihiisa waxaan ka daayay in ay arkaan lacagtii ay ku jirtay oo aan haddana xidhay. Markii uu wejigayga eegay, ma ahayn oo kaliya in uu is beddelo, laakiin guntida laabta ayaa si muuqata u korodhay.
"Nasiib i raac," ayuu ku tuntay.
Waxa aan ka faa’iidaystay socdaalka wiishka, sidii aan waayadan dambe u baran jiray, in aan ka waramo inta ay le’eg tahay lacagtu iyo inta albaab ee aanay furi karin, inta silsiladood ee jaban, inta dareen ee daruuriga ah, iyo inta xumaanta. in ay isu rogaan xanta. Runtu waxa ay tahay in aan weligay, dhammaan sannadihii aan dooxan oomanaha ah ku soo dhex-jiidhaynayey birta xun-xun, sida kuwa aan si fiican u jeclayn ay ugu yeedhaan, la iima ogola, sidaas darteed, in aan la ii oggolaado. pontificate on saamaynta tirtirka ah oo kuwa isaga yaqaan ay u nisbeeyaan isaga. Waxaan ka hadli karaa hammi iyo hunguri, waayo meel dhow ayaan ku arkay. Lacagta, maya. Sida saxda ah, sida aan ka ogahay waayo-aragnimada, waxay u adeegtaa si looga fogaado kuwa leh xiriir dhegdheg leh kuwa aan lahayn. Oo si daacad ah oo dhan waxaan qirayaa in aysan ii muuqan mid xun: saboolka, haddii aan tirakoobyadu igu guuldareystaan, waxaan nahay fool xun, af-xumo, daawaynta qallafsan, dharbaaxo iyo, marka kulaylku cadaadisayo, waa cudur xun. Waxaan sidoo kale haysanaa, waxay yiraahdaan, marmarsiiyo, aragtidayda, aan waxba ka beddelin xaqiiqda. Waxa run ah oo aan ka yarayn in, haddii ay maqan tahay aqoonsi kale, in aynu u sii dadaalno oo aynu hadal badan nahay, ka go'no, xishood lahayn, akhlaaq iyo kalgacal ahayn oo aan dhanaan, danayste, daba-dheerayn, qallafsanaan iyo akhlaaq la'aan ahayn, sida aynnu shaki la'aan noqon lahayn. Waxaan ahayd inaynu noolaanno, kuma tiirsanaan lahayn in badan oo ka dhicid nimcada. Waxaan filayaa, in aan ku soo gunaanado, in haddii aynu dhammaanteen hodan nahay oo aynaan ka shaqayn sidii aynu u kasban lahayn chickpeas, ma jiri lahayn ciyaartoy kubbadda cagta ah ama kuwa dibileyda ah ama koob-kaliyayaal ama dhillo ama bolse, noloshuna aad bay cawl u ahaan lahayd, meerahanina waxa uu noqon lahaa mid aad u weyn. barxadda murugada leh.
Qarsoodiga qarsoodiga ah
Marxaladaas laga soo bilaabo waxaan xasuustaa anigoo farxad ku tuuraya wakhtiga badda, anigoo rajaynaya in buufinku duuli doono oo uu mustaqbal wanaagsan i geeyo. Hilow waalan, sababtoo ah waxaan had iyo jeer ahaan doonaa wixii aan horey u ahaan jirnay.
Marka mustaqbalka aan la hubin, ficillada iyo dareenka ayaa hadda ku urursan in waqtiyada caadiga ah ay u koraan si deggan oo qurux badan.
Dabeecadda aadanaha ayay ku jirtaa in uu lumiyo marka ay riyooyinku bilaabaan inay rumoobaan.
Sirta ku dayashada la waayey
Hadafkaagu waa in aad hesho ilmaha yar oo aad u soo celiso isagoo bedqaba oo ammaan ah mulkiilihiisa. Haddii aad samayso mugdi ka hor, waxay ku siin doonaan cunto fudud oo waxaad yeelan doontaa ephemeral oo hubaal naadir ah, laakiin marnaba la dayacin, mahadnaqa dadka saamaynta leh. Haddii kale, waanu ku garaaci doonnaa ka hor intaanan dib kuugu celin qulqulka. Waad arki doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Dhalashadii Eduardo Mendoza. Xulashada jajabka iyo odhaahyada
Blas Malo Poyatos. Wareysi lala yeeshay qoraaga Disdain and Fury
Nieves Concostrina: buugaagta